बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार – List Khabar
Home / समाचार / बिहे नहुँदै विक्की कौशलले दिए कट्रिनाकी आमालाइ यति ठुलो उपहार
admin December 6, 2021 समाचार Leaveacomment 46 Views
वास्तवमा, विक्की कौशलले पनि कट्रिनाको परिवारलाई पूर्ण समर्थन गरिरहेका छन् र उनलाई आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कुराको कमी महसुस गर्न दिइरहेका छैनन्। त्यसैले अब विक्कीले कट्रिनाकी आमा र परिवारका सदस्यहरूलाई किनमेल गर्न कुनै समस्या नहोस् भनेर आफ्नो कार दिएका छन्। शनिबार कट्रिनाको परिवारले शहरमा किनमेल गर्न निजी कार लिएका थिए। यसपछि ५ डिसेम्बर अर्थात आइतवार विक्कीको कारमा कट्रिनाको परिवार देखियो । यतिबेलाको भिडियो र तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
Previous ओमिक्रोन १० दिनभित्रै ३५ देशसम्म पुग्यो, यसबाट बच्न के गर्ने ? जान्नुहोस्।
Next बिहानै बासी मुखमा पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ ? सबैले जानी राखौं